Nibilaogy hatry ny fahakeliny: mampihena ny hantsana nomerika ao Orogoay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 4:02 GMT
Mandalo dingana ara-tantara i Orogoay. Amin'ny taona 2009, hanana solosaina finday azy ireo manokana (OLPC) omen'ny fanjakana ny ankizy sy ny mpampianatra rehetra eny amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy sekolim-panjakana ao amin'ny firenena. Nankatòa didim-panjakana mametraka ny Tetikasa Ceibal ny filoha Tabare Vasquez. Nomena ny anarana voninkazon'i Ceibo heverina ho toy ny voninkazo nasionalin'i Orogoay ny tetikasa.
Tsy manome fitaovana sy fidirana amin'ny foibe fanabeazana ihany no tanjon'ny tetikasa fa miantoka ny fampiasana azy ireo, ny fampiofanana ny mpampianatra, ny fampivoarana ny votoaty ary ny fampiroboroboana azy ireo eo amin'ny fiarahamonina. Ireto misy fanazavana bebe kokoa momba ity ezaka lehibe ity. Niteraka fanamby ho an'ny sehatry ny fampianarana koa izany. Niara-namoaka lahatsoratra momba ny fiantraikan'ny Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana eo amin'ny fampiofanana mpampianatra ny profesora Fernando da Rosa mba hiresahana ireo olana ireo.
Mila ampianarina ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo ny ankizy mba haneho ny hevitr'izy ireo amin'ny fomba mafy kokoa noho ny teo aloha ka hampiseho ny kolontsainy, ny fomba fisainany ary ny tena zava-misy. Miaraka amin'ny vatsy ara-bola fanampian'ny Rising Voices, hikarakara andiana atrikasa ny Drafitra Pablo Flores of Ceibal ary hanangona bilaogera nasionaly sy iraisam-pirenena miaraka amin'ireo mpianatra sy ny solosaina mba hampianatra azy ireo ny fomba fananganana bilaogy sy hahay haka tombony amin'ny fampiasana ireo fitaovana hafa ara-tsosialy.
Ny 27 Jona, namoaka ny boky “Ceibal eo amin'ny fiarahamonina tamin'ny taonjato faha-21″ ny Ceibal Plan – Tondro ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra (amin'ny teny Espaniola) izay natonta tamin'ny fanohanan'ny UNESCO. Dikan-tsoratra sasany tamin'ny fampahafantarana azy izay navoaka tao amin'ny bilaogin'ny tetikasa amin'ny teny anglisy:
Azonao atao ny mitroka ny boky ao amin'ny aterineto amin'ny teny Espaniola ato (endrika pdf) – Ho avy tsy ho ela ny dikan-teny Anglisy. Azonao atao ny miditra amin'ny antsipirian'ny boky ato..
German sy Micaela mandefa ny sarin'izy ireo ao amin'ny bilaogy kilasy taona faha-3 mampiasa XO
Nanao fanandramana tamin'ny bilaogy ny mpampianatra sy ny mpianatra ao amin'ny sekoly Laharana. 24 ao amin'ny Villa Cardal ao amin'ny Departemantan'i Florida ao Orogoay. Nandefa vazivazy vitsivitsy ny Blog experimental de la escuela Nº24 de Villa Cardal (bilaogy fanandraman'ny kilasy taona faha-efatra ao amin'ny Sekoly Laharana faha-24 Villa Cardal). Ity ny bilaogin'ny kilasy taona fahadimy izay mizara sary sy tantara mahaliana momba ireo biby ao amin'ny toeram-pambolena. Ny bilaogin'ny kilasy fahenina kosa namoaka tantara sy momba ireo mpitety firenena.
Avy amin'ny bilaogy Ceibal Florida:
Mpianatra roa ao amin'ny Sekoly Faha-116 “Repoblikan'i Arzantina” any Florida i Agustin Gallo sy Cristian Fleitas. Rehefa avy nanandrana ny fitaovana rehetra nomen'ny XO anay, dia nahatsapa fa “nankaleo” izy ireo. Noho ny “premium”, nahita ny Scratch (programa ho an'ny XO) i Cristian ary tsy nandao azy intsony nanomboka hatreo. (dikantenin'ny milina)